JINGHPAW KASA: ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်
ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင် စီရဲ့ကြေငြာချက်က ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာပါတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသူတို့တာဝန်ဘဲလို့ပြောနေလို့မရပါဘူး။ခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရဟာဘာတာဝန်မှမယူခဲ့ပါဘူး။ယခုအစိုးရကိုတာဝန်ယူခိုင်းတာလဲအလကားပါဘဲ။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရဟာဘယ်နှစ်လအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးမရရင်နုတ်ထွက်မယ်လို့ပြောပြီးလုပ်ဆောင် ရင်တော့တမျိုးပေါ့။ဗမာတွေအ ပေါ်ဘယ်တိုင်းရင်းသားမှမယုံဘူး။စစ်မှန်သောစေတနာ အကျိုးကျေးဇူး ဘယ်တုန်းအခါမှမရှိခဲ့။
All member of UNFC muste be blind, dreaf, and don't have brain. If guys don't act like Kachin Army , the Fadara that you guys request with mouth will never get. Kachin Army bravo. May God Bless Kackin.